रमेश बुढाथोकीसँग ‘भुइँमान्छे’ संवाद : एक्टर दुईपटक जन्मन्छ
By soniya on	 10th August 2017 समाचार, सेलिब्रिटी
एक विद्धान भन्छन् : मानिस दुईपटक जन्मन्छ । पहिलो भौतिक जन्म र दोेस्रो किन बाँच्दैछु भन्ने कारण । अभिनेता रमेश बुढाथोकीका लागि सम्भवतः दोस्रो जन्म हुनुपर्छ ।
यी पाका अभिनेताले उत्तराद्र्धमा कस्ता फिल्म खेल्दैछु र खेल्नुपर्छ भन्ने कारण पत्ता लगाए । उनी सिनेमा ‘भुइँमान्छे’लाई कारणबाट सिर्जित उत्पादनको रुपमा चिनाउन चाहन्छन् । नहोस् पनि किन, उनी हिजोआज श्यामश्वेतभन्दा खैरो रङका पात्र बन्न चाहन्छन् ।
‘भुइँमान्छे’मा उनको यस्तै अवतार छ । ट्रेलर हेर्दा मनोवैज्ञानिक थ्रीलरमा उनलाई प्राप्त गर्न सक्छौं । उनी प्रेम गर्छन्, कुण्ठा पोख्छन् र उनको दिमागमा अर्कै दृश्य घुमिरहेको छ । एउटै पात्रभित्र अलग व्यक्तित्व निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चेत र फिल्म छनौट उनीभित्र हुर्किएको छ ।
‘मनोवैज्ञानिक विचलन भएको मान्छे हुँ म फिल्मभित्र । जटिल प्रकृतिको पात्र छ’ उनी पात्रबारे खुले, ‘रिसर्च गर्दा भेटिएको वास्तविक पात्रको जीवनमाथि खेलेको हुँ । फिक्सन छैन । तर, प्रस्तुतिकरण फिक्सन हुनसक्छ ।’ प्रस्तुतिकरणमा लिबर्टी भएपनि सिनेमाले दर्शकलाई कन्भिन्स गर्ने बताउँछन् ।
तपाईं किन ग्रे क्यारेक्टर गर्न रुचाउनुहुन्छ ? भन्छन् : यस्ता पात्र गर्नु मेरो रुचि हो । पछिल्लो समय समाजमा नदेखिएका यस्ता पात्रमाथि अभिनय गर्नुमा मेरो चाख छ । म फिल्म छान्दा पनि यस्तै हेर्छु । भुइँमान्छेजस्ता पात्र रोज्छु ।
कसरी दर्शकले फिल्मको भुइँमान्छेलाई आफ्नो जीवनसँग रिलेट गर्न सक्लान ? रमेशसँग यसको पनि उत्तर छ । भन्छन् : अहिले जो कोही नैराश्यता र निराशबाट उम्कन चाहन्छ । भुइँमान्छे भएकैले त्यो सपना पुरा हुन्छ या हुँदैन । सपना देख्ने तर पुरा नगर्नेको कथा हो यो ।’
भुइँमान्छेमा रमेशले सिपोरा गुरुङसँग अनस्क्रिन रोमान्स पनि गरेका छन् । धेरै कुरा फिल्म हेरेपछि थाहा लाग्ला । ‘म असल र सफल सिनेमा भन्ठान्छु’ उनको फिल्मी परिभाषा छ, ‘केही फिल्म यस्ता हुन्छन् जसले बक्सअफिसमा तहल्का त मच्चाउँदैनन् तर, आफूलाई मनमा सजाएर भने राख्छन् ।’
रमेश पछिल्लो समय चुजी छन् । संख्याभन्दा गुणलाई फलो गर्छन् । उनी यस्ता अभिनेता हुन् जससँग अनुभव छ र भविष्य पनि । ‘अहिलेका मेकरले पुरानो पुस्तासँग पनि काम लिनुपर्छ । एक्टरले पनि राम्रा छान्नुपर्छ । होइन भने, मान्छेले बिर्सँदै जान्छन्’ रमेशको यो महसुस थियो ।
अधिकांश चलचित्रमा आवरण हुने तर गुदी नहुने उनको ठम्याइ छ । भुइँमान्छेलाई उनी गुदी भएको फिल्म भन्छन् । ‘बलियो कन्टेन्टमा फिल्म बनेको छ । भुइँमान्छे कन्टेन्टरुपी गुदी भरिएको सिनेमा हो’ उनले भने । अब उनलाई फिल्मको संख्या बढाउने रहर छैन । उपयुक्त विषयवस्तुको खोजीमा हुन्छन् उनी ।
भदौ २ गते ‘भुइँमान्छे’ रिलि हुँदैछ । नवराज बुढाथोकी निर्देशित सिनेमाले पोस्टमार्टममा सक्रिय एक पात्रको कथा पेश गर्छ ।